Gadzira tende nyowani - China Green Camping Zvigadzirwa
Usati wagadzira tende, iwe unofanirwa kuziva ichave tende rinoshandiswa uye mhando nharaunda ichave iri tende rinoshandiswa, sekumisa misasa, kukwira, mahombekombe, mauto, kana sekuvanda kwezuva, ndiyo inoshandiswa munzvimbo inotonhora kana inopisa. Nzvimbo, kune mhepo yakasimba nemvula, pane chero chinodiwa here. Ipapo iwe unogona kutanga kugadzira tende.
Pano isu tora igloo tende semuenzaniso. Iyi tende ndeyeGermany musika weCamper. Iyo inofanirwa kuve yakakodzera kune vanhu vatatu, kukurumidza kumisa-uye kuvhara, inofanira kunge ichishanda kwevhiki imwe chete yekudzika misasa, inoda kuve nenzvimbo yeiyo rucksack, shangu uye accessories. Ipapo tobva taenda nemazasi matanho.
Sekureva kwa ISO5912, munhu mumwe nemumwe anofanira kunge aine nzvimbo kutenderera 200 x 60cm, munhu matatu haafanire kupfuura 200 x 180cm. Sezvo munhu weGermany akakura pane zvakajairwa, isu tinofunga kuva nehukuru hwayo 210 x 200. Iyo kureba kazhinji inotenderera ne1-1-140cm yeIgloo tende, isu tinofunga 120cm, sezvo paine panofanira kunge paine 20cm kuruboshwe yekukurumidza kuseta-up system. Kuti uve nenzvimbo yerucksack uye zvimwe zvinongedzo, isu tinoda kuve ne vestibule kutenderedza 80-90cm kumberi kwemusuwo. Zvino, tinogona kutanga kugadzira iyo sketch. Vazhinji vevagadziri vematende vane dhizaini yekugadzira makore ano.
Mushure mokunge dhiragi yapera, Mugadziri anogadzira dhiza racho zvichienderana nehembe. Makore gumi apfuura, mafekitori mazhinji etende anogadzira ndiro nemaoko, asi ikozvino, vazhinji vevatengesi vematende vanogadzira ndiro nesoftware.
Prinda ndiro pakutanga, wozocheka mucheka wacho zvinoenderana nendiro yacho.
pirinda ndiro yetende
Senda yekutanga edza sampuro.
Gadzira-simudza muyedzo wekuyera uye tarisa kana yakanaka kana ichida kugadziridzwa, inowanzoda kutarisa maitiro, saizi, chimiro, kuvaka, kuisa-kumusoro uye kuvhara panguva ino. Kana zvese zvanaka, saka gadzira tende rekupedzisira riine zvinhu zvakanaka uye chimiro. Kana paine chinoda kugadziriswa, cheka mucheka uye gadzira 2 nd , 3 rd , 4 th … edza muyenzaniso uye wongorora zvakare. Sechikumbiro ichi chetende chinokurumidza kumiswa uye kuvhara, tinosarudza amburera-senge system.
Kana muyedzo wekuyedza wapedzwa, wobva waita yekupedzisira sampuro nemucheka wakakodzera, shandisa chimiro chakakwana uye zvinhu, kunge sedanda yetende, tambo yemhepo. Nekuti iyi tende ndeye yekamperi kweinenge vhiki imwe chete kunze, isu tinofunga kuve nemvura yakakwirira yekumonera mucheka uye tepi musono. Wobva waita iyo bvunzo zvinoenderana nebasa rakatemerwa ekushandisa. Semvura isina mvura, mhepo inodzivisa, anti-UV, dhiza-tambo kuramba, mhepo yemhepo inoshanda, mutoro unorema…
Pano ingori chiitiko chakajairika chekugadzira tende nyowani, kunze kwezvinhu zviri pamusoro, pane zvakawanda zvimwe zvinhu zvinoda kufungwa nezvazvo, sekuyera uremu, saizi yekupakura, durability, mvura kudzikiswa, kuchengetedzwa, mutemo zvinodiwa kudzimwe nyika dzekupedzisira mushandisi. . Kana iyo tende iri yehondo, semauto tende atigadzira yenhengo yeNATO, iri rakaomarara uye rinofanira kufunga zvakawanda uye kuyedza zvakanyanya.
Nguva yekutumira: Jul-25-2020